Any Bolgaria, Ohatra Iray Amin’ny Fanehoan’ny Mpialokaloka Maniry Mba Te Ho Vahaolana Fa Tsy Olana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2016 11:13 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, čeština , srpski, Italiano, Nederlands, عربي, Deutsch, русский, English
Manohy manaraka ny antsoina hoe làlan'i Balkan avy any Torkia ho any Hongria mba hitady fiainana tsara kokoa any Eoropa Andrefana, ireo mpitsoa-ponenana nandositra ny ady sy fanenjehana tany Siria, Iràka, Afghanistana sy tany an-toeran-kafa, ary ny governemanta Eoropeana sasany manohy mandray azy ireo amin'ny fankahalàna. Mampiasa ny fisiany ireo mpanao politika avy amin'ny hery ankavanana mba hampitahorana ny mpifidy azy ireo, ary any amin'ny tany sasany dia ampiasaina ho toy ny fialantsiny ami'ny asan'ny milisy ny krizin'ny mpitsoa-ponenana.
Ny lahatsoratra iray vao haingana avy amin'ny Tambajotran'ireo Balkàna Mpanao Gazety Mpanao Fanadihadiana (BIRN) momba an'i Bolgaria dia milaza tantaran'ny lehilahy iray izay mampiseho ny fahafahan'ny mpialokaloka manolotra vahaolana amin'ny olana sasany efa misy, amin'izany ny fanomezan'izy ireo ny talentany ho an'ireo orinasa izay tsy ampy mpiasa tsara ofana.
Ny fanambaran'ny Bratislava, nolanian'ireo filoham-panjakàna 27 sisa tavela ao amin'ny Vondrona Eoropeana (tsy miaraka amin'i Angletera) tamin'ny 16 Septambra, dia mampiasa fiteny toa mandranitra fa tsy fampahatsiahivana bebe kokoa ny toetry ny ady miohatra amin'ny maha-olombelona. Ohatra, miresaka izy momba ny ‘fanolorantenan'ny firenena maromaro mpikambana amin'izao andro izao mba hanolotra fanampiana maika hanamafisana ny fiarovana ny sisintanin'i Bolgaria miaraka amin'i Torkia, no sady manohy manohana ireo “Fanjakana sasany any ambava-ady” (nampiana fanamafisana).
Mahatsiaro marefo eo anatrehan'ny fampijaliana ireo mpialokaloka sy ireo hafa mpifindra monina. Nanamarika ny tranonkala Politico.com fa ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona any Hongria dia naneho ny ahiahiny mikasika ny fiarahamonina iraisam-pierenena izay manodina ny masony tsy hahita ireo fanararaotana isan-karazany ataon'ireo manampahefana any amin'ny sisintanin'i Hongria.
Nanana anjara tamin'ireo krizin'ny mpitsoa-ponenana nandritra ny 100 taona farany i Eoropa. matetika tsy mba namaly fitserana ny fitondram-panjakana, na eo aza ny fitondrantena tsy maintsy arahana. Maro amin'ireo firenena any amin'ny làlan'i Balkàna ankehitriny no voakasika mivantana ho toy ny loharano nipoiran'ireo olona lasa an-tsesitany, no sady toy ny toeram-piantsonan'ny mpitsoa-ponenana taorian'ny ady tao Balkàna , ny Ady Lehibe I, ny Famonoana faobe,, ny Revolisiona Hongroà ny taona 1956, ary ireo fampielezankevitra ho ‘fanadiovana ara-poko’ tamin'ny taona 1990 tany Iogoslavia teo aloha.